Iimpawu, ukuthanda ukwazi kunye nendlela yokuphila kwedonphin epinki | Ngeentlanzi
Nangona isenokungabonakali ngathi injalo, kukho iintlobo ezintlanu zamahlengesi ezihlala emilanjeni. Eyona idumileyo kuzo zonke ihlengesi epinki. Kukwaziwa ngegama leBoto, iBoutu okanye i-dolphin yoMlambo iAmazon. Ngeli gama sele sazi apho lihlala khona kunye neendawo elihamba kuzo. Igama labo lenzululwazi ngu-Inia geoffrensis kwaye bakwi-Inea genus, eyinxalenye yosapho lukaPlatanistoidea.
Kweli nqaku siza kuthetha ngehlengesi epinki ngokunzulu, kuba ayilulo olo hlobo lwehlengesi esiqhele ukubona.
2 Izisongelo zehlengesi epinki
4 I-Anatomy kunye nokuziphatha
Ezi ntlobo zehlengethwa azifani neziqhelekileyo sidibana nazo elwandle. Benze ulungelelwaniso oluthile ukuze bakwazi ukuhlala emilanjeni ngaphandle kwengxaki. Ngapha koko, ezi dolphin zikude kubazali nakwezaselwandle, kuba zivela kwiintsapho ezahlukeneyo.
Phakathi kweentlobo ezikhoyo zamahlengesi omlambo, ezi dolphin zipinki zezona zikrelekrele. Banobunzima bengqondo obuphezulu kakhulu kunabanye. Umbuzo, Inesikhundla esingama-40% ngaphezulu kunaleso somntu. Oku kunokumangalisa ngaphezulu kwesinye kodwa kuyinyani.
Nangona behlala kuMlambo iAmazon, ngokubanzi, singabafumana kwimiqolomba yoMlambo iOrinoco nakwezinye iindawo eziphakamileyo zoMlambo iMadeira. Nangona ikakhulu zipinki, sikwafumana imibala eyahlukileyo enje ngombala omdaka okanye ongwevu okhanyayo (lo ingumbala oqhelekileyo "oqhelekileyo" phakathi kwehlengethwa ezaziwa ngcono).
Benza uninzi lwabemi beli dolphin abakhoyo, ukusukela ukuba ezinye iintlobo zemilambo emi-4 zisemngciphekweni wokufa okanye zitshabalale. Kulusizi ukuba nanini na kukho into ekhethekileyo kwindalo bayingozi ngenxa yabantu kunye nezenzo zabo ngokuchasene nendalo.
Ezi dolphin zomlambo ziphakathi kweentlobo ezisengozini yokuphela kwazo zonke iicetacean emhlabeni. Baye bahlelwa yi-International Union yoLondolozo lweNdalo (IUCN) njengezilwanyana ezinobungozi ezisengozini kwaye kutshanje ziye zahlelwa njengezilwanyana ezisengozini yokuphela.
Izisongelo zehlengesi epinki
Ezi dolphin zizidalwa zentlalo kunye nezinobuhlobo. Baye bahlala kangangeenkulungwane eAmazon nakwindawo engena kuyo. Nangona kunjalo, ukutshatyalaliswa kweAmazon ezandleni zabantu kukhawuleziswe kakhulu ukuya kwinqanaba lokubeka esichengeni amatyeli amaninzi.
Phakathi kwezisongelo eziphambili esizifumanayo sinokonyuka kwamanqanaba okungcoliseka kwe-mercury. Imercury sisinyithi esinzima esibangela ukonyuka kwenani lokufa kwabantu ngonyaka kwi dolphin epink. Kufuphi nemigodi yegolide apho kusetyenziswa imekyuri njengenxalenye yokutsalwa, kulapho iimeko zokufa ngaphambi kwexesha zivela kakhulu.
Ngokwenene kuyinto eyoyikekayo kwicala lomntu. Ukuze sinxibe imixokelelwane yegolide nezacholo, zininzi ihlengesi ezipinki ezisweleka ngenxa yongcoliseko lwamanzi lwe-mercury. Ikwasongelwa kukwanda kwezithuthi kuMlambo iAmazon. Ezi zilwanyana zinomdla ngokwendalo kwaye ziza emikhombeni ukuze zibone ukuba yintoni. Ukusondela kubo, bahlaselwa ngokukhawuleza ngabaqhubi kwaye bafe kwangoko, okanye bonzakele kakhulu.
Kuya kufuneka ucinge ukuba zizilwanyana zasekuhlaleni nezinobuntu kwaye bafuna ukudlala. Nangona kunjalo, siyazitshabalalisa izitokhwe. Ingxolo eveliswa ngoomatshini kunye neinjini ibangela ungcoliseko lwengxolo kwaye ibangela imeko ephazamisayo kwiinkqubo zokuhamba onazo. Baninzi kangaka abafayo ihlengethwa abapinki.
Ezi cetaceans zondla ngononkala, ezinye iintlanzi ezincinci zemilambo, ezinye ezincinci kunye nezinkulu. intlanzi yekati yeyiphi oyithandayo. Kuba oononkala noofudo bahlala kwindawo ezisezantsi zomlambo amaxesha amaninzi, ihlengesi ezipinki zihlala zidada zijonga ezantsi ukuze zibone ukutya abanokukubamba.
Phakathi kweempawu ezinazo, kukho enye ebanceda ukuba bazingele kumanzi anzulu nakwiindawo ezizele ngamanzi. Eli nqaku libume bomqolo womlomo wesibeleko. Kwaye kukuba la ma-vertebrae awadityaniswanga kwaye oku kuyabavumela ukuba bahambise iintloko zabo ukuya kuthi ga kwiidigri ezili-180 ngaphandle komonakalo.
Ukuzingela iintlanzi ngenjongo yokutya kufuna iindlela ezininzi ezinje ngokutyisa emadlelweni. Obu buchule buqulathe ukubekwa ngokwabo kwiqela leentlanzi ukuze zikwazi ukugxila kwindawo kwaye, ngenxa yoko, bayatshintshana ekubambeni nasekutyeni. Le ndlela isetyenziswa rhoqo ngokudibene nezinye ihlengesi ezipinki.
I-Anatomy kunye nokuziphatha
Nangona imibala ebonakalayo ibangumbala opinki, ongwevu okhanyayo okanye omdaka, akukho bungqina besayensi bokuba kutheni benalo mbala. Kusenokwenzeka ukuba banolungelelwaniso olukhethekileyo lobomi emlanjeni. Kusenokwenzeka ukuba lo mbala ubangelwe linani lee-capillaries abanazo eluswini. Umbala opinki uyaqina xa bethe nqa okanye bonwabile. Oku kunokuthelekiswa xa abantu benamahloni nakweyiphi na into evuselelayo.
Uninzi lwala mahlengesi aluphantse lube yimfama, kuba amanzi omlambo abhuqekile. Ngenkqubo yokuhlengahlengisa, amehlo aye esiba mbi kwaye nengqondo ikhula kwaye ikhula. Ngokungafaniyo nehlengethwa elwandle, ezi dolphin zinamaphiko emqolo amancinci kakhulu.
Ukuziphatha kakuhle, banokubonakala bezona zilungileyo kuzo zonke izilwanyana zemilambo xa abantu bekufutshane. Bayakwazi ukuhamba umgama omalunga neekhilomitha ezingama-30 ngosuku, nangona bekwenza kancinci ukusukela oko bahlala bekhangela ukutya kufutshane nenxalenye esezantsi yomlambo.
Amadoda nabasetyhini baqala ukukhwelana. Nje ukuba igqityiwe, ixesha lokumitha eliphakathi kwe-9 ne-12 leenyanga liqala. Ixesha lokuzala kwabaselula kuxa inqanaba loMlambo iAmazon liphezulu xa liphuma kuwo. Oku kuhlala kwenzeka phakathi kwenyanga zika-Meyi ukuya kuJulayi. Abancinci xa bezalwa, banobunzima obuyi-1 kg kwaye banama-75 cm ubude.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nehlengethwa epinki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Ihlengethwa elipinki